(SAWIRRO)Kulan Loogaga Hadlayay Saameynta Fatahaadaha Ay Ku Yeesheen Beeralayda oo Lagu Qabtay Buulo-Burte
Kulan looga hadlayay saameynta ay ku yeesheen fatahaada wabiga Shabelle beeraleyda degmada Buuloburte ayaa lagu qabtay maanta magaalada Buulo-burte.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiir ku xigeenka wasaarada beeraha iyo waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim”Daqare”,La taliyaha Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Faarax Makaraan iyo mas’uuliyiin ka socotay Midowga Iskaashatooyinka Beeraha degmada Buulo-burte.
Mas’uuliyiinta iskaashatoyinka beeraha ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 55 tuulo ay baab’iyeen beerihii ku yiil oo lagu qiyaasi karo illaa saddex kun oo hekter kuwaasoo dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen.
“Boqolkiiba sagaashan dadka ku nool degmada Buuloburte waxa ay ku tiirsan yihiin beeraha waxaana soo gaaray qasaare aan sanado badan hore loo arag beeralayda .”ayuu yiri mid ka mid ah beeralayda Buulo-burte.
Wasiir ku xigeenka Beeraha Hirshabelle Maxamed Bashiir iyo La taliyaha Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Makaraan oo maalmihii la soo dhaafay booqasho ku joogay magaalada Buuloburte ayaa sheegay in indhahooda ay ku soo arkeen fatahaadaha ka jira degmada Buuloburte ayna la wadaagi doonaan dhammaan waxyaabihii ay ku soo arkeen degmada.
Wasiir ku xigeenka Beeraha Hirshabelle Daqare ayaa kulankan ka sheegay in la xaliyay khilaaf ka taagnaa maamulka degmada Buuloburte. Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in uuna booqasho ku tego degmada Buuloburte Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Previous (AKHRISO)Maxaa Looga Hadlay Kulanka Golaha Aqalka Sare?
Next Abiy Ahmed oo wajahaya eedeymo la xiriira inuu hurinayo xasillooni darada ka jirta Somalia iyo Suudaanta Koofureed